news | Kumudra Skip to main content
တိုက်ဖြိုရင်း တိုက်ပြို လို့ သေဆုံးသူနှစ်ဦးရှိ ရန်ကုန် ၊ ဧပြီ ၂၆။ ။အလုံမြို့ နယ် ဌာနေရပ်ကွက် အလုံလမ်း အမှတ်၁၅၅ မှာ သုံထပ်တိုက်ဲပြိုကျမှုတစ်ခု ယနေ့ ညနေ ၄း၀၀ ၀န်းကျင်က ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ထရိုက်ပေးဖို့ တိုက်ဖြိုနေရင်းပြိုကျတာလို့ သိရပါတယ်။ပြိုပြိုချင်း ပိနေသူတစ်ဦးကိုကယ်ထုတ်ဆေးရုံပို့ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုထိ၎င်းဟာဒဏ်ရာရရုံလောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ထပ်မံပြီး၎း၄၀ ၀န်းကျင်မှာ ပိနေသူတစ်ဦးထပ်မံထုတ်ခဲ့ရပြီး ၅း၃၀ ၀န်းကျင်မှာ နောက်ထပ်တစ်ဦးကို ထပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်နှစ်ဦးကသေဆုံးနိုင်ခြေများတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
အနာဂတ်ကိုယ်စီနဲ့ သုခရိပ်မြုံ မှ ကလေးငယ်များ သင်္ကြန်သီချင်းသံလေး ဖွင့်ပြီး လူ ရှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့၊ ခြောက် ယောက်တစ်ဖွဲ့ အရွယ်စုံ အကတိုက်နေ ကြတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ဝတ်ထားတာ တွေက အိမ်နေရင်းချည်သားဘောင်းဘီပွ ပွလေးတွေ၊ တီရှပ်ပွပွလေးတွေနဲ့ပါ။ ဆံ ပင် ကို စည်းသူစည်း၊ ချသူချ၊ ထုံးသူထုံးနဲ့ ပါ။ သူတို့လေးတွေက ပါးစပ်တလှုပ်လှုပ်နဲ့... အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး ကျောင်းမအပ်နိုင်သေး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုးကူးစက်ခံ ထားရတဲ့ ကလေးတေကို အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ သည်ကလေး မှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုးရှိတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး အပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိသေးသလို ဘယ်လိုပဲ ပညာပေးပေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေက ရှိ နေတုန်းပဲလို့ သိရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှကျားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချိန်ယူရပါမယ်SITA Asia Pacific Geography ဥက္ကဋ္ဌ Ilya GUTLIN နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေဆိုရင် လေဆိပ်မှာသုံးတဲ့ အိုင်တီ နည်းပညာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၊ ၂၅ နှစ် လောက်ကတည်းကပါ။
မြန်မာ မှာကျတော့ အဲသည်နည်းပညာတွေက လုံးဝအသစ်ပါပဲ။
ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားတို့ SID ဖြုတ်စေချင် ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉ - နိုင်ငံတကာ သင်္ဘော လိုင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ CDC (Continuous Discharge Certi-ficate- သင်္ဘောသားလုပ်သက် မှတ်ပုံ တင်) အပြင် မလိုအပ်တဲ့ SID လုပ်နေရ တာကို မလုပ်သင့်တော့ကြောင်း လုပ် သက်ရင့် သင်္ဘောသားတချိ... ညဘက် စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် ၁၀ ဖွဲ့ ခွဲ စစ်ဆေး တစ်လအတွင်း အစီးရေ ငါးသောင်းကျော် စစ်ဆေး ရန်ကုန်မြို့တွင်း ညပိုင်း အချိန်တွေမှာ ယာဉ်စည်းကမ်း ဖောက် ဖျက်တဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ် အစီးရေ ၁၀ဝ၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ယာဉ်တိုက်ပြေး ခုနစ်ဆယ်ကျော်၊ သုံးဆယ်ကျော်သာ ဖော်ထုတ်နိုင်သေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်တိုက်ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေး တဲ့ အမှု ၇၀ ကျော်ထဲက အမှု ၃၀ ကျော် သာ ဖော်ထုတ်နိုင်သေးတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
အနာဂတ်ကိုယ်စီနဲ့ သုခရိပ်မြုံ မှ ကလေးငယ်များ သင်္ကြန်သီချင်းသံလေး ဖွင့်ပြီး လူ ရှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့၊ ခြောက် ယောက်တစ်ဖွဲ့ အရွယ်စုံ အကတိုက်နေ ကြတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ဝတ်ထားတာ တွေက အိမ်နေရင်းချည်သားဘောင်းဘီပွ ပွလေးတွေ၊ တီရှပ်ပွပွလေးတွေနဲ့ပါ။ ဆံ ပင် ကို စည်းသူစည်း၊ ချသူချ၊... အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး ကျောင်းမအပ်နိုင်သေး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုးကူးစက်ခံ ထားရတဲ့ ကလေးတေကို အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ သည်ကလေး မှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုးရှိတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး အပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိသေးသလို ဘယ်လိုပဲ ပညာပေးပေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ... မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှကျားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချိန်ယူရပါမယ်SITA Asia Pacific Geography ဥက္ကဋ္ဌ Ilya GUTLIN နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေဆိုရင် လေဆိပ်မှာသုံးတဲ့ အိုင်တီ နည်းပညာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၊ ၂၅ နှစ် လောက်ကတည်းကပါ။
တစ်နေ့တည်း ယာဉ်တိုက်မှုသုံးခုဖြစ် မတ် ၂၉ ရက် ရန်ကုန်မြို့ နယ်အတွင်း မြို့နယ်သုံးခုမှာ ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခုစီ ဖြစ်ပွားပါတယ်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်း ရှုတင် မန် နေဂျာတစ်ယောက် မောင်းနှင်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ကားတစ်စီးက ဝင်တိုက်မိလို့ ရှုတင်မန်နေဂျာနဲ့ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ဆရာ အမျို... မတ်လတွင်း ဆိုင်ကယ်ဖမ်းဆီးမှု ၁၅၀ ကျော်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆိုင်ကယ် နယ်ကျော်စီးမှုတွေ များပြားလာသလို ဖမ်း ဆီးမှု ၁၅၀ ကျော်အထိရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
“ဆိုင်ကယ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေး နေတယ်၊ အဲဒီကနေ ဆိုင်ကယ်တွေက မြို့ထဲကို ဝင်ရောက်လို့ ဖမ်းဆီးမှုတွေက ပို... ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားတို့ SID ဖြုတ်စေချင် ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉ - နိုင်ငံတကာ သင်္ဘော လိုင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ CDC (Continuous Discharge Certi-ficate- သင်္ဘောသားလုပ်သက် မှတ်ပုံ တင်) အပြင် မလိုအပ်တဲ့ SID လုပ်နေရ တာကို ... ညဘက် စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် ၁၀ ဖွဲ့ ခွဲ စစ်ဆေး တစ်လအတွင်း အစီးရေ ငါးသောင်းကျော် စစ်ဆေး ရန်ကုန်မြို့တွင်း ညပိုင်း အချိန်တွေမှာ ယာဉ်စည်းကမ်း ဖောက် ဖျက်တဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ် အစီးရေ ၁၀ဝ၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
အနောက်ဘန်ဂေါက အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့် ခံရသူကို လျော်ကြေးပေးဖို့ အမိန့်ချ ဇန်နဝါရီလတုန်းက ရွာသူကြီး တွေရဲ့ ညွှန်ကြားမှုတွေကြောင့် အုပ်စုဖွဲ့ အ နိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ မျိုးနွယ်စုအမျိုးသမီး တစ် ဦးကို အနောက်ဘန်ဂေါအစိုးရက ရူပီး ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ (၈၁၅၃ ဒေါ်လာ) လျော်ကြေး ပေးဖို့ အိန္ဒိယတရားလွှတ်တော်က ဆုံး ဖြတ်ချ... မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲအတွက် အထူးဈေးရောင်းပွဲတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မန္တလေးမြို့ နေရာအနှံ့ အပြားမှာ သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွက် ဈေး ရောင်းပွဲတွေ၊ အထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချနေပြီး အရင်နှစ်ကထက် လာဝယ် တဲ့သူများတယ်လို့ လျှော့ဈေးရောင်းချနေ တဲ့ ဆိုင်တွေထံမှ သိရပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှုသတင်း မီဒီယာ များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာရန် ဆွီဒင်၊ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေ အစရှိသော စကင်ဒီနေးဗီယားနိုင်ငံ များသို့ ယခုနှစ်အတွင်းသွားရောက်ခဲ့သည်။
MORE RECENT VIDEOS Journal Download
Tuesday, October 28, 2014 Download Tabbed Content
ပေ ၁၀ဝ အထက် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် အာမခံစပေါ်ငွေ ၇၅ သိန်း ထားရမည် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် လူငယ်ဖလားပြိုင်ရန် မြန်မာလူငယ်တွေ ထိုင်းမှာ လေ့ကျင့်မည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ သင်္ကြန် ရေကစားမဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်လို သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ အထက်အဝယ်နဲ့ ကားဈေးကွက် ခပ်သွက်သွက်ပြန်ဖြစ် ဒေသန္တရအမိန့် လှိုင်သာယာမှာ မရုပ်သိမ်းသေး ကုမုဒြာဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၅) အယ်ဒီတာ့အာဘော်
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ချောင်ပိတ်ရင် အားလုံးနစ်နာနိုင် ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ရခက်အောင် ရေးဆွဲထား ပြီး ပြင်ဆင်ရာမှာ ခက်ခဲအောင် ချောင်ပိတ်လိုက်ရင် တိုင်းပြည်နစ်နာ နိုင်တာကို သတိမူကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများ
ရက်စွဲ ဒေါ်လာ ရွှေ အက်ဖ်အီးစီ ရွှေဈေးနှုန်းနဲ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထာ၊းများ 964.6 670,700 13.3.2013 877-884 746500 877-881 ၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ၈၄၅ ၇၆၅,၀၀၀ ၈၄၇ MORE Kumudra
ဟံသာဝတီလေဆိပ်စီမံကိန်း ရပ်နား အနီးဝန်းကျင် အိမ်ခြံမြေဈေး ကျဆင်း ဟံသာဝတီလေဆိပ်ပရောဂျက် ရပ်နားထားတာကြောင့် စီမံကိန်း အ နီးဝန်းကျင်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ ကျ... မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေ အာရှမှာ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အစိုးရမူဝါဒကောင်းဖို့ လို အိုးအိမ်ဘဏ်ချေးငွေ အဆင်သင့်ရှိပေမဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းတွေအတွက် အချိန်ယူဖ... ဒေါ်လာဈေးအောက် ပို့ကုန်နဲ့ အဝေးဈေးရောက် အနုပညာနှင့်ဖက်ရှင်
သည်လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ မိုင်ဟောက်စ်ဇာတ်ကား မေလ ပြသမည် သည် မတ်လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ပြသတဲ့ My House သရဲကားကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂျန်းရှင်းရ... နေရာအခက်အခဲကြောင့် စိုးသူတစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲ ရက်ရွှေ့ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်မည် အီးဒီးယာ့တ်ရဲ့ အသက်ငွေ့ငွေ့ အမ်တီဗီ ရိုက်ကူး ဖုန်း
ကြိုတင်မှာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ကျပ်ခြောက်သိန်းခွဲဝန်းကျင် ဂလက်ဇီ အက်စ်ဖိုက် ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဧပြီ ၁ ရက်ကနေ ၉ ရက်နေ့ အထိ ကြိုတင်မှာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ဆမ်ဆောင်း ဂလက်ဇီ အက်စ်ဖိုက်... မတ် ၂၈ မှာ စတင် ရောင်းချတဲ့ အိတ်ခ်ျတီစီဝမ်း... Pebble စမတ်နာရီရဲ့  လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး ဟွာဝေး ၊ ဝန်ဆောင်မှုအကောင... သတင်း
အနာဂတ်ကိုယ်စီနဲ့ သုခရိပ်မြုံ မှ ကလေးငယ်များ သင်္ကြန်သီချင်းသံလေး ဖွင့်ပြီး လူ ရှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့၊ ခြောက် ယောက်တစ်ဖွဲ့ အရွယ်စုံ... အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြေ... မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှကျားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချိန်ယူ... တစ်နေ့တည်း ယာဉ်တိုက်မှုသုံးခုဖြစ် ကား
ဆူဘာရု ထရီဇာ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်ကားကုမ္ဗဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဆူဘာရုက ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေ ထဲက Subaru Trezia ကို ဝယ်မယ်ဆိုရင်... ဂျစ်ကား ရှာမရ အရောင်းအဝယ်သွက်ပေမဲ့ ကားဈေးအနည်းငယ်ကျ ကညန အခွန်လျှော့ ပြီးနောက် ကားဈေး အနည်းငယ် ကျဆင်းသွား ကျန်းမာရေး
ကူးစက်ရောဂါတွေထက် ဆီးချိုသွေးချို ပိုဖြစ်ပွားလာ ကူးစက်ရောဂါတွေထက် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါက ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မှာ ဖြစ်ပွားနှုန်း နှစ်ဆနီးပါးြ... စီပိုးရှိသူ ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်နိုင်ခြေများ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး မရှိလို့ အဖြစ်များ ခွဲမွေးဖို့ တိုက်တွန်းလာ Business
Copyright © 2012 Kumudra Journal. All rights reserved. Developed by Bagan Innovation Technology.